Isi ụlọ ọrụ - Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd. emi odude ke E6 factory ụlọ, ulo oru sayensị na Technology Park, Xixiu District, Liangliu Road, Xixiu District, Anshun City, Guizhou Province, ekpuchi ebe 3200 ㎡, na 409 ㎡ mmepụta nkwakọba, anyị nwere 2000 ㎡ ogbako na 420 ㎡ office na ebe obibi. Anyị ụlọ ọrụ bụ a ụlọ ọrụ tụnyere R & D, imewe, mmepụta na n'ire. Anyị kpebiri iji nye ndị ahịa anyị ọrụ kacha mma.
Nke anyi ụlọ ọrụ nwere ọkachamara na mmepụta nke mkpuchi FFP2, nkpuchi FFP3, nkpuchi nchedo onwe onye nke kn95, ihe mkpuchi ịwa ahụ ahụike, ihe nkpuchi ndị nwere ike ịchụpụ, anyị nwere mmepụta nke ụlọ anyị nke iru eru ahụike, anyị agafeela ule ule ụlọ Gb2626-2006, ụkpụrụ ndị si mba ọzọ. en 149, na 14683, CE, wdg.
Naụlọ ọrụ na-ejikọ R & D, imewe, ika na ire ere iji bụrụ ụlọ ọrụ ama ama n'ụwa. Site na ntanetị nke teknụzụ, anyị na-abata na ụlọ ọrụ ahụike ma anyị na-enye usoro abụọ nke masks nwere ike iwepụ na nkpuchi kn95, FFP2 mask, FFP3 mask maka ọha mmadụ.
Otu Shun AKF Medical Technology Co., Ltd.bụ ihe ohuru ohuru nke ihe nkpuchi,
Site na nhọpụta na ịzụta ihe iji rụpụta nkwakọ ngwaahịa, na nhọta nke igwe, wdg, anyị na-ekpebi ịbụ ndị kachasị mma na ụlọ ọrụ a.
Anyịga-agba mbọ hụ na ihe nkpuchi ọ bụla anyị mepụtara kachasị mma na ụlọ ọrụ a. Kwe ka onye ọrụ ọ bụla nke nkpuchi AKF nweta
ihe nchebe kacha mma.
Naugbu a, a hụwo ihe nkpuchi Runbo n'ọtụtụ mba na mpaghara gburugburu ụwa, gụnyere Europe, United States, Germany, United Kingdom, Australia, Russia, Hong Kong, wdg. Ọ rụọla ọrụ dị mkpa n'oge oge ntiwapụ ahụ, anyị na-atụ anya na ọtụtụ ndị ahịa ọkachamara n'ụlọ na mba ofesi ga-atụkwasị obi na aha Runbo. Anyị na-achọkwa ka ị nwee ihe ịga nke ọma n'ịlụso ọrịa ahụ ọgụ!
Njikọ njikọ ：